Hexagonal Wire Netting Factory - China Hexagonal Wire Netting mpanamboatra, mpamatsy
Namboarina tamin'ny alàlan'ny tariby nandrisika mialoha na tariby tsy misy fangarony araka ny fenitry ny EU, Ity harato fanamafisam-peo ity dia mihatra amin'ny volon'ondry rock na volon'ondry fitaratra ho an'ireo tsihy tariby.
Garden Hexagonal Chicken Wire Netting Electro nandrisika 40mm
Kitapo tariby hexagonalnovokarina tamin'ny kalitao avo lenta amin'ny tariby vy ambany karbaona, vita amin'ny galvanisaly na plastika mifono mandritra ny androm-piainana lava. Ny harato dia mafy orina amin'ny rafitra ary misy fisaka fisaka. Ny harato hexagonal dia ampiasaina matetika amin'ny fananganana indostrialy sy fambolena. Izy io koa dia azo ampiasaina ho fefy ho an'ny tranom-borona, fanjonoana, zaridaina, kianja filalaovana ankizy ary haingon-trano Krismasy.
Lobster Fandrika Hexagonal Plastika mifono akoho tariby
Lobster trap hexagonal wire mesh, Plastic Chicken Wire miaraka amin'ny fotoana maharitra, dia vita amin'ny harato tariby GAW hex, avy eo mandro plastika, manaova firakotra PVC matevina. Ny rano sy ny masoandro mahatohitra.
Wire vorona ara-toekarena ho an'ny biby
Tady akoho vita amin'ny tariby nandrisika, tariby mifono PVC miloko maitso, tariby vy tsy misy fangarony manana meshes hexagonal. Ilaina amin'ny fanidiana karazana biby isan-karazany, toy ny akanin-jaza, fihinana, akoho, bantam, akoho amam-borona, vorombola, kisoa, pheasant, lambo dia ary capybara. Amidy amina horonana 30m, 50m na ​​100m ny halavany ary miovaova matetika.
PVC mifono akoho vala Wire Garden Wire
Ny tariby akoho mifono PVC dia ampiasaina amin'ny zaridaina na fambolena. Ny tariby fototra dia tariby mitafo vy izay misy karazan-tariby elektro roa sy tariby mafana atsoboka. Ny arofanina fiarovana PVC dia mahatonga ny tariby akoho haharitra taona maro kokoa noho ny tariby akoho tsy misy sarona. Ny loko dia maitso, mainty ary mavo.
Novokarina tamin'ny tariby nandrisika mialoha na tariby tsy misy fangarony araka ny fenitry ny EU, metatra lava be 3600m no mahatonga azy hitohy amin'ny tampon-trano na amin'ny làlana. Ity harato fanamafisam-peo ity dia mihatra amin'ny volon'ondry rock na volon'ondry fitaratra ho an'ireo tsihy tariby.
Hexagonal Chicken Wire Fencing Fiarovana ny biby 31mm
Fiarovana biby mifono akoho tariby 25mm Hot Dip nandrisika
Chicken Wire Netting dia matanjaka sy malefaka, mety tsara amin'ny tokotanin'ny akoho amam-borona, tranon'akoho, fiarovana ny zavamaniry ary zaridaina. Izy io dia vita amin'ny tariby vy nandrendrika mafana nalentika ho an'ny tanjaka sy fiarovana fanampiny amin'ny toetr'andro.
Bolongana akoho, karazana harato hexagonal miolakolaka, manana toetra manokana mety ampiasaina amin'ny fananganana. Izy io dia mora ampiasaina amin'ny vala akoho sy tranom-boankazo, ary mora volavolaina sy bobongolo. Izy io dia ampiasaina amin'ny zaridaina ho fiarovana ny vorona kely, na amin'ny fiompiana akoho na biby kely. Ampiasaina amin'ny lafiny fambolena koa izy io.
Tady akoho mavesatra amin'ny fambolena dia nofonosin'i Pallet
Antsoinay koa hoe akoho akoho akoho na lambam-pandrefesana hexagonal. Matetika izy io dia ampiasaina hiarovana ny voly sy ny varimbazaha.Kitapo tariby hexagonalnovokarina tamin'ny kalitao avo lenta amin'ny tariby vy ambany karbaona, vita amin'ny galvanisaly na plastika mifono mandritra ny androm-piainana lava. Ny harato dia mafy orina amin'ny rafitra ary misy fisaka fisaka. Ny harato hexagonal dia ampiasaina matetika amin'ny fananganana indostrialy sy fambolena.